ငါ့ကိုအနီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမိနစ်တတ်နိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်လေကြောင်းလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ်ပဏီအတှကျအဲယားဘတ်စ် A319 ဂျက်လေယာဉ်ပြည်ထဲရေးပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှုကသင်၏ဧရိယာ၌နှစ်လယ်ပိုင်းအရွယ်အစား deadhead ရှေ့ပြေးဗလာခြေထောက်ကိုးကားပေါ်တွင်သင်၏လာမည့်ခရီးသွားဦးတည်ရာဘို့.
အဆိုပါအဲယားဘတ်စ် ACJ319 လေကြောင်းပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလူတန်းစားလေယာဉ်များဖြစ်ပါသည်. ၎င်း၏ဒီဇိုင်း A320 စီးပွားဖြစ်ယာဉ်အပေါ်တွင်အခြေခံထားပါသည်. အဆိုပါလေယာဉ်များမှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် 1997 နှင့်မူရင်း A319 ထက်ပိုလောင်စာဆီတိုင်ကီများတပ်ဆင်ထား. ဒါဟာလေယာဉ်၏ကြာကြာအကွာအဝေးခရီးသွားလာနိုင်ဆိုလိုတယ် 6000 nm သို့မဟုတ် 6,905 မိုင်. ဒါဟာပုံမှန်အားစင်းလုံးငှားကုမ္ပဏီများနှင့်ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းတို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတန်းစား features တွေ၎င်း၏အထင်ကြီးအကွာအဝေးမှကျေးဇူးတင်စကား operated ဖြစ်ပါတယ်.
၏အတွင်းပိုင်း ACJ319 ကျယ်ဝန်းနှင့် Ultra-ခေတ်သစ်ဖြစ်ပါသည်, အရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးစဉ်အပေါ်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ဆောင်ထိုသို့စံပြအောင်. အဆိုပါလေယာဉ်အများအပြားကဏ္ဍများနှင့်အတူကြွလာ, အရာ ensuite ရေချိုးခန်းနှင့်အတူမာစတာအိပ်ခန်းထဲမှာအပန်းဖြေဖို့ခရီးသည်ကို enable, အဆိုပါ Lounge ဧရိယာထဲမှာရုပ်ရှင်ကြည့်ရှု, အစည်းအဝေးများကျင်းပဒါမှမဟုတ်ထမင်းစားခန်းဧရိယာထဲမှာအစားအစာကိုခံစား. ဒါဟာသူ့ရဲ့အတန်းထဲတွင်အကြီးဆုံးအခန်း Cross-အပိုင်းဝါကြွားနှင့်မတူနိုင်တဲ့ဇိမ်ခံထောက်ပံ့. အာဆီယံပဋိညာဉ်စာချုပ်ကိုလေယာဉ် State-Of-The-Art features တွေပါတဲ့ဘုံယာဉ်ကမ်းလှမ်း.
အတွင်းပိုင်းတိကျသောအခန်းလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှအပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်များမှာ. ဒါဟာသာရှိပြီးဝန်ထမ်းဧရိယာရှိပြီးပျံသန်း-by-wire ကိုထိန်းချုပ်မှုန်ထမ်း.
မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအားဖြင့် Airbus လေယာဉ်ပျံ A319 စိတ်ဝင်စားမှု
အဆိုပါအဲယားဘတ်စ် ACJ319 ဂျက်လေယာဉ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဒါဟာအဲယားဘတ်စ် ACJ319 အဆိုပါ ACJ မိသားစုထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးလေယာဉ်ပျံတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာအံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာ. ဒါဟာအကွာအဝေးတစ်ခုစံပြပေါင်းစပ်ပေးသည်, ဇိမ်ခံပြီးကျယ်ဝန်းအခန်း. ဒါဟာဆီထည့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲဒူဘိုင်းဖို့ဒါမှမဟုတ် Las Vegas မှာထံမှလန်ဒန်တောင်အာဖရိက Cape Town ကနေသွားလာနိုင်ပါတယ်. ဤသည်ကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးစဉ်အပေါ်စတင်အမှုဆောင်အရာရှိမှအများကြီးလိုအပ်နေသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထောက်ပံ့.
အဆိုပါလေယာဉ်တင်မှတက်လိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ် 50 ခရီးသည်. ဒါဟာအစအော်ပရေတာများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်အပိုဆောင်း configuration options ကိုကမ်းလှမ်း. အဆိုပါ ACJ319 မြင့်မှာပိုမိုမြန်ဆန်ပျံသန်းဖို့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်, အရှင်ပျံသန်းအချိန်လျှော့ချ.
အဲယားဘတ်စ် A319 ဂျက်လေယာဉ်ဇိမ်ခံကားပြည်ထဲရေးပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှု #emptyleg #Jetcharter #emptylegs #wysluxury # AirbusA319Jetairliner # airbusa319 # airbusa319seating # airbusindustriea319 # a319airbus #Luxuries #lifestyle #travel
အားဖြင့်မျှဝေတစ်ဦးက post ကို WysLuxury JetCharter (@wysluxury) အပေါ် အောက်တိုဘာ 11, 2017 တွင် 8:09နံနက် PDT ရန်ကုန်
ဘိုးအင်းဂျက်လေယာဉ်လေကြောင်း & Models များစာရင်း